August 2017 – Dhammadīpa
Posted on 26 Aug 2017 by Ashin Sopāka
“When cattle are crossing [a ford],
“So too, among human beings,
“When cattle are crossing [a ford]
if the king is righteous.” – AN 4.70
jimhaṁ gacchati puṅgavo;
Sabbā tā jimhaṁ gacchanti,
nette jimhaṁ gate sati.
So ce adhammaṁ carati,
Sabbaṁ raṭṭhaṁ dukkhaṁ seti,
ujuṁ gacchati puṅgavo;
Sabbā tā ujuṁ gacchanti,
nette ujuṁ gate sati.
So sace dhammaṁ carati,
Sabbaṁ raṭṭhaṁ sukhaṁ seti,
“ကူးကုန်သော နွားတို့တွင် ရှေ့ဆောင်နွားလားသည် ကောက်တကျစ် သွားခဲ့မူ၊ ရှေ့ဆောင်နွားလား ကောက်တကျစ် သွားသည်ရှိသော် နောက်လိုက်နွားမ အားလုံးတို့သည် ကောက်တကျစ် လိုက်သွားကုန်၏။ ဤအတူသာလျှင် လူတို့တွင် အမြတ်ဆုံးဟု သမုတ်အပ်သူသည် အကယ်၍ တရား မဟုတ်သည်ကို ကျင့်အံ့၊ ဤမှ တစ်ပါးသော သတ္တဝါအပေါင်းသည် အဘယ် ဆိုဖွယ်ရာ ရှိအံ့နည်း၊ မင်း တရားမစောင့်သည် ဖြစ်အံ့၊ တစ်နိုင်ငံလုံး ဆင်းရဲရ၏။ (မြစ်ကို) ကူးကုန်သော နွားတို့တွင် ရှေ့ဆောင်နွားလားသည် ဖြောင့်ဖြောင့်သွားခဲ့မူ၊ ရှေ့ဆောင်နွားလား ဖြောင့်ဖြောင့်သွားသည်ရှိသော် နောက်လိုက်နွားမ အားလုံးတို့သည် ဖြောင့်ဖြောင့်ပင် လိုက်သွားကုန်၏။ ဤအတူသာလျှင် လူတို့တွင် အမြတ်ဆုံးဟု သမုတ်အပ်သူသည် အကယ်၍တရားကို ကျင့်အံ့၊ ဤမှ တစ်ပါးသော သတ္တဝါအပေါင်းသည် အဘယ်ဆိုဖွယ်ရာ ရှိအံ့နည်း၊ မင်း တရားစောင့်အံ့၊ တစ်နိုင်ငံလုံး ချမ်းသာရလေသတည်း။”
“Khi đàn bò lội sông,
Top: Black Vulture
Bottom: Fish Crow
Posted in Dhamma	| Tagged dhamma, leadership